Isifundo: Ukuhamba komsebenzi ngeAdobe Bridge kunye neAdobe Photoshop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Isifundo: Ukuhamba komsebenzi ngeAdobe Bridge kunye neAdobe Photoshop (Icandelo I)
UAntonio L. Carretero | | ngokubanzi, Photoshop, Tutorials
Ingcali ye ucingaNokuba ungumyili, umzobi wezithombe okanye umfoti, ufuna ukuba kwinqanaba eliphambili lomsebenzi wakho, kuya kufuneka uyazi ukuba ungaziphatha njani ngokuchanekileyo iinkqubo ezahlukeneyo zekhompyuter ezinikezelwa yitekhnoloji, kunye isoftwe oko kukuvumela ukuba usebenze kakuhle, ukuze ube nokukhuphisana emsebenzini wakho.
Itekhnoloji yeentsuku zethu yenze ukuba ulwazi lwazo naziphi na iinkangeleko ozibize kumhlathi odlulileyo zitshintshe iimpawu zobungcali babo, obenze ukuba bafunde izakhono ezitsha ukuze bakwazi ukuphucula umsebenzi wabo. Kumfoti namhlanje, kubaluleke ngakumbi ukwazi indlela yokuphatha ukuhlela kunye nenkqubo yombutho kunokwazi ukusebenzisa igumbi elimnyama. Yiyo loo nto ndikuzisela namhlanje i Isifundo: Ukuhamba komsebenzi ngeAdobe Bridge kunye neAdobe Photoshop (Icandelo I) .
Namhlanje, a ikhamera ye digital inokudubula iifoto ezingamakhulu, apho ngaphambi kokuba umntu alayishwe iwaka leerili, namhlanje kwanele ukuphatha amakhadi angama-32gb, athabatha isiqingatha sendawo kwaye aphindwe kabini ngokusebenzayo. Ukwazi indlela yokusebenzisa ifilimu kweli xesha lethu kukungabinachronism, kuba phantse akukho khamera inakho ukufaka ifilimu. Kwisithuba esingaphambili sibonile Isifundo: Ngokukhawuleza khetha i-typography ene-Illustrator, apho ndikufundisa khona ubuchule bokukhetha uhlobo lokuchwetheza ngokukhawuleza.
Olu ngeniso sisiqalo sothotho lwezifundo apho ndiza kukufundisa ukuba uhambe ngokuvakalayo, usebenzisa iinkqubo ezimbini zeSuite Adobe njengokuba zinjalo iblorho (umququzeleli womfanekiso onamandla kakhulu) kunye Photoshop (Inkqubo yokuhlela umfanekiso ngokugqwesa) ukufumana ezona ziphumo zibalaseleyo kwelona lifutshane, xa usenza unyango lwe ucinga kwiqela lemifanekiso.
Kule meko ndiza kusebenzisa iseshoni yefoto endiyenzele umthengi malunga nenja yakhe, uMalusi waseJamani ogama lingu Lenny eyajika yaba ngumzekelo omkhulu. Siqala kwisiseko sokuba iseshoni ikhutshelwe kwifolda ngokwayo kwaye inegama Ulenny. Ukuqhuba oku tutorial Kuya kufuneka ufake i-Adobe CS6 Suite kuphela, nangona uninzi lwezinto onokukhetha kuzo zifumaneka kuzo zonke iinguqulelo zangaphambili. Ndikushiya incwadi eneefoto ze Lenny en un ikhonkco Ekupheleni kwe tutorial.
Injongo yoku tutorial, Kukunika intetho elungileyo kwifoto Lenny, eneefoto ezinamagama, ezihleliweyo kunye nezenziwe ngokutsha, kwaye utyale ubuncinci bexesha kule nkampani ukuze ufumane imali ethe kratya ngeyure yomsebenzi. Ndiqinisekile ukuba uya kuba nam kuba lusukelo olo.
1 Oda ngaphezulu kwayo yonke into
2 Qamba kwakhona ngokulula
3 Khetha kwaye ulungelelanise
Oda ngaphezulu kwayo yonke into
Masiqale ngokuhlela ifolda Lenny, kuba kufuneka sijonge ngaphambi kokuthatha isigqibo sokuba loluphi unyango esiza kulwenza kwiifoto njengeqela (hayi ngokwahlukeneyo, kuba ukuba sithatha isigqibo sokunikezela nge-retouch eyahlukileyo kwifoto nganye, kuya kufuneka senze olunye uhlobo lobuchule ukuhamba komsebenzi xa kufikwa ekwandiseni ubudlelwane phakathi komgangatho womsebenzi, ixesha elityaliweyo kunye nemali efunyenweyo. Ukujonga iifoto siza kuvula Adobe Bridge, indawo esiza kuyisebenzisa ukujonga, ukukhetha, ukulungisa (ukuba kukho imfuneko), imethadatha kunye nokuthega umsebenzi wethu.
Qamba kwakhona ngokulula
Ukusebenza ngegama elinikwa yikhamera kwifoto, ngaphandle kokuba lusizi ngandlel 'ithile, akunakwenzeka, kuba amagama anzima aya kwenza nzima ukuba sikhethe. Ukuthiya zonke iifoto ekutsaleni, zonke iifoto zikhethiwe (Ctrl + alt) emva koko siye kukhetho Zixhobo kwaye sikhetha ukhetho Batch Guqula igama.
Ibhokisi yencoko yababini iya kuvulwa, eya kuthi ibe neenketho ezahlukeneyo, ukuze igama kunye nenombolo yeefoto ngeendlela ezahlukeneyo, kubandakanya umhla, igama, kunye nee-millisecond. Singagcina ukhetho lwegama esifuna ukukwazi ukuluqhuba kweminye imisebenzi, okanye nokuba kugcinwe uninzi. Siza kukhetha ukhetho olusinika igama le Lenny okwenombolo ye serial. Nje ukuba yonke imifanekiso ibe namagama, siqala ukukhetha nokuzilungisa ezigwenxa, nokuba sizilinganisile okanye asizilinganisi ezona sizithandayo ngenkqubo yeenkwenkwezi okanye ukwahlula ngokwamaqela ngokuxhomekeke kubaluleka kwawo okanye ukuba kukho naluphi na uhlengahlengiso iyimfuneko.
Khetha kwaye ulungelelanise
Siza kukhetha iifoto esizithanda kakhulu kwaye siza kubanika inqanaba ngeenkwenkwezi. Oku kuyakusinceda emva koko sikwazi ukuwafumana ngokukhawuleza ngokhetho olwenza ukuba inkqubo ikwazi ukuyenza. Siza kubalungisa ukuze singayenzi Photoshop, kuba ukwenza loo nto kwinkqubo yokuhlela kungachitha ixesha kwaye ngekhe kungene ukonwaba kwe ukuhamba komsebenzi iyavakala.
Adobe Bridge Isinika ithuba lokulebhelisha iifoto usebenzisa inkqubo yokufumana amanqaku kunye nenkqubo yokuphawula imibala, eziluncedo kakhulu ukwahlula phakathi kweefoto ezahlukeneyo zeseshoni enye, phakathi kwezinye izinto ezininzi. Siza kuqhubeka emva kokukhetha ezo zikhangeleka zilungile, sibhala iilebhile kwaye sizolule ezi ziyifunayo, sizidibanise ngokwamaqela ngokweemfuno zeqela ngalinye leefoto. Emva kokusebenzisa iblorho Siza kuzihlela ngeefolda.
Ngalo msebenzi sele sigqibile siya kudlulela phambili Adobe Photoshop kwisifundo esilandelayo.
Mas informacion – Isifundo: Ngokukhawuleza khetha i-typography ene-Illustrator
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Isifundo: Ukuhamba komsebenzi ngeAdobe Bridge kunye neAdobe Photoshop (Icandelo I)
Isifundo: Ukuhamba komsebenzi ngeAdobe Bridge kunye neAdobe Photoshop (Icandelo lesi-2)
Iifonti zokukhuphela simahla ezi-5 zomsebenzi wakho